Wiil u dhashay wadanka UK oo Dubai ugu xaniban 46,000 oo dollar. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / World News / Wiil u dhashay wadanka UK oo Dubai ugu xaniban 46,000 oo dollar.
Wiil u dhashay wadanka UK oo Dubai ugu xaniban 46,000 oo dollar.
August 9, 2018 - By: Mohamud Nadif
Qoyska dhalay wiilkaan Britishka ah oo lagu magacaabo Faysal Xaashi 00 25 sano jir ah ayaa sheegay in wiilkooda uu ku xaniban yahay dalka isu taga imaaraatka carabta gaar ahaan magaalada Dubai laguna khasbay in uu sii joogo , ka dib markii uu ganaax dhan 46,000 oo dollar ku mataystay xawaare uu ku waday gaari isaga oo maraya waddada ugu mashquulka badan ee Dubai laguna magacaabo Sheikh Zayed Road waxa uuna gaariga ku kaxeeyay 240km saacaddii.
Faysal Xaashi walaalkiis ka wayn oo lagu magacaabo Aadam ayaa sheegay in uu faysal gaariga ka kiraystay Lamborghini Huracán , ka dibna uu xawaare qaldan ku maray wadadaas dhawr jeerna uu ku celceliyay khaladkaas, Adman Xaashi ayaa sheegay “in ay huteelka ugu yimaadeen ayna waydiisteen baasaboorkiisa ka dib markii uu u soo dhacay tikitka ganaaxa, uuna sidaa ku bixiyay baasaboorkiisa isaga oo cabsanaya.
“Hadda waxay leeyihiin waxaa waajib ah in uu bixiyo 40,000 oo giniga istarlinka ah waana arrin qaab daran. Ma haysto lacagtaas. Shaqo la’aan ayuu ahaa, Dubai wuxuu ku booqday saaxiibbadii, wuxuu sheegay in walaalkii uu lacag amaahday si uu uga bixiyo maalmaha dheeraadka ah ee uu huteelka dagan yahay, qoyskiisuna aysan ogayn inta uu halkaas sii joogi doono” ayuu Adam u sheegay wargayska The National oo ay soo xiganayso BBC.